Shiinaha Mashiinka duubista mashiinka barkin soo noqnoqoshada Soo saar iyo Warshad | Yuanhengtong
Qalabaynta mashiinka CNC ee qaybaha aan caadiga ahayn
Qaybo machining CNC machining qalabaynta non-istaagi ...
Qaybaha mashiinka mashiinka CNC ee qalabka guud
Qaybo kala duwan oo loo rogay qaabab kala duwan
Mashiinka barkinta barkin soo noqnoqoshada soo noqnoqda
Baaxadda codsiga Inta badan waxaa loo isticmaalaa salka dheriga, wolfberry iyo waxyaabo kale oo joogto ah oo leh saxaarad qaab adag ku shaqeynaya astaamaha Functional 1. Xakamaynta soo noqnoqda laba-laabka, dhererka boorsada ayaa la dejiyaa isla markaana la gooyaa isla markiiba, looma baahna in la hagaajiyo madhan, waqtiga la badbaadiyo iyo filim la badbaadiyo. 2. Qoraal is-dhexgalka mashiinka aadanaha, dejinta halbeegga habboon ee deg degga ah. 3. Cilad is-ogaanshaha cilladda, muujinta cilladdu way cadahay. 4. Raadinta heerka midabka indhaha ee korantada leh ee xasaasiga ah, daboolida saxda ah iyo booska goynta. 5. T ...
Waxaa badanaa loo isticmaalaa salka dheriga, yeeyga iyo waxyaabaha kale ee caadiga ah oo leh saxaarad qaab adag ku dhisan
1. Xakamaynta qalabka isdabajooga laba jibbaaran, dhererka bacda ayaa loo dejiyaa isla markiiba waa la gooyaa, looma baahna in la hagaajiyo madhan, waqtiga la badbaadiyo oo filim la badbaadiyo.
2. Qoraal is-dhexgalka mashiinka aadanaha, dejinta halbeegga habboon ee deg degga ah.
3. Cilad is-ogaanshaha cilladda, muujinta cilladdu way cadahay.
4. Raadinta heerka midabka indhaha ee korantada leh ee xasaasiga ah, daboolida saxda ah iyo booska goynta.
5. Xakamaynta heerkulka madaxbanaan ee PID, oo ku habboon noocyada kala duwan ee baqshada.
6. Shaqada joojinta shaqada, ma leh mindi ul, filim ma leh.
7. Nidaamka gudbinta waa mid fudud, deggan oo fudud in la ilaaliyo.
1. Mashiinka baakadka mugga koobku si otomaatig ah ayuu u dhammaystiri karaa gaadiidka dhejiska, cabbirka, buuxinta, samaynta bacda, daabacaadda taariikhda, daboolida kuleylka, goynta iyo alaabada kale.
2. Mashiinka wax lagu rakibo wuxuu kobciyaa nidaamka wadista mootada.
3. Si loo hubiyo dhererka isdaba-joogga ah ee bacda wax lagu duubo, nidaamka dareeraha sawir qaadaha ee dareenka sare leh ayaa loo adeegsadaa in lagu xaqiijiyo baakadka otomaatiga ah ee filimka baakadka.
4. Mashiinka baakadka waxaa lagu qalabeeyaa nidaam kumbuyuutar lagu xakameeyo.
5. Waxaan rakibnay nidaamka kululaynta heerkulka joogtada ah si loo hubiyo in heerkulku uu xasilloon yahay heerkulkiisuna lagu hayo + / - 1 ℃.
6. Qaybaha korantada iyo hawo-mareenka mashiinka waxaa bixiya alaab-qeybiyeyaal la isku halleyn karo oo iskaashaday sannado badan, taas oo aan hubin oo kaliya tayada mashiinka, laakiin sidoo kale keydineysa qiimaha iibka.
7. Lambarka boorsada iyo lambarka xirmada waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Waxay quseysaa baakadaha cuntada la ballaariyey, cuntada firaaqada ah, lawska, qaraha iyo miraha, iniin, bariis, cusbo, abuur, monosodium glutamate, sonkor, digir, galley, buskud, fur, qalab, ciddiyaha, lowska, boolal iyo waxyaabo kale iyo qalab adag.
Width Of Baako Film 450mm
Dhererka wax taaj oo kale 70-350mm
Ballaadh Qaab-samaynta 180mm
Alaabtu aad bay u sarreeyaan 100mm
Ballaca Filimka 320mm
Xawaaraha xirxirashada 20-120bag / min
Shuruudaha Awooda Korantada 380V, 50 / 60HZ
Qalabka Baakadaha OPP / PE, PE / PT, PAPE / PE, BOPP / PE
Guud ahaan Cabirka 480 （L) * 1060 (W) * 1500 (H)
Miisaanka Mashiinka 120KG
Hore: Dib-u-cusbooneysiinta mashiinka baakadaha MSW650
Xiga: Qalabaynta mashiinka baakadaha ee MSW450
Mashiinka kartoonka iswada ee MSZH
Mashiinka xirxira rootida otomaatiga ah
Dib-u-cusbooneysiinta mashiinka baakadaha MSW650
Qalabaynta mashiinka baakadaha ee MSW450
Qalab kala qaybiye saxaarad toos ah
MSFT Horizontal side side otomaatig ah